कसरी एक Lousy ग्राफिक डिजाइनर बन्न: Claymitously बर्बाद गर्न परम मार्गदर्शक क्रिएटिव अनलाइन
केही महिना को लागी हामीले केही निजी सन्देश प्राप्त गरेका छौं फेसबुक y twitter हामीलाई उही प्रश्न सोधेर। वेबमा धेरै पौराणिक कथा छन् जो साँच्चिकै क्लासिक ग्राफिक डिजाइनर बन्न चाहान्छन्। यो कुनै अनौठो कुरा होइन, यो त्यस्तो व्यक्तित्व हो जुन सामाजिक नेटवर्कको उदयसँगै हराइरहेको छ र श्रम अधिकारका ती सबै प्रवर्तकहरू।
के क्लासिक डिजाइनर बर्बाद भयो र उसको कामका सर्तहरू गिर्दो बनाउने प्रणाली द्वारा घुटन टेकियो? कहाँ छन् "म समाप्त गर्न सक्दिन" वा "तपाईले भुक्तान गर्नुहोस्, म डिजाइनर हुँ"? आज हामी यहाँबाट ती सबैलाई मद्दत गर्न चाहन्छौं जसले साँचो डिजाइनरको पहिचान पुन: प्राप्ति गर्न चाहन्छन् र जसले पुरानो बानी बसाउन चाहेको विनाश गर्न चाहन्छन्।
1 यदि डिजाईन तपाईको व्यवसाय हो भने यहाँबाट निस्कनुहोस्!
1.1 ब्रान्डि?? तपाईंलाई यसको आवश्यकता पर्दैन जबसम्म तपाईं आकर्षक डिजाइनर हुन चाहनुहुन्न
1.2 तपाईंको प्रशिक्षण अवधि सकियो, तपाईंलाई अरू केहि जान्नु आवश्यक पर्दैन
1.3 बजारमा सर्ने मूल्यहरू जाँच वा परामर्श नगर्नुहोस्
1.4 मार्केटिंग र (हामी दोहोर्‍याउँछौं) ब्रान्डि you तपाईंको लागि होईन
1.5 धेरै महत्त्वपूर्ण: तपाईले कमाएको भन्दा बढि खर्च गर्नुहोस्, अन्यथा यसले मुनाफा लिन सक्छ
1.6 संगठित नहुनुहोस्, धेरै कम कामको तालिका सेट गर्नुहोस्
1.7 यदि कसैले तपाईंलाई काममा राख्छ भने, उनीहरूको कुरा सुन्नुहोस् र निश्चित रूपमा उनीहरूलाई राम्रो सेवा नदिनुहोस् वा डेडलाइन पूरा नगर्नुहोस्
1.8 आफन्त र छिमेकीहरूलाई नि: शुल्क कामको प्रस्ताव गर्नुहोस्
यदि डिजाईन तपाईको व्यवसाय हो भने यहाँबाट निस्कनुहोस्!
यो सानो गाइड सुरू गर्नु अघि म तपाईंलाई चेतावनी दिन्छु कि ग्राफिक डिजाइन स्पष्ट रूपमा एक पेशागत पेशा हो। यसको मतलब यो हो कि यस गाइडमा सबै सुझावहरूको लागि काम गर्नको लागि, एउटा आधारभूत आवश्यकता पहिले पूरा गर्नुपर्दछ: केवल यो पेशामा आफूलाई समर्पित गर्नुहोस् डिफल्टद्वारा वा, असफल हुँदा, निम्न कारणका लागि:
तपाईं एक काम खोज्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईंलाई सजिलो, द्रुत र धेरै जटिलता बिना नै शंकास्पद आर्थिक स्तर कायम गर्न अनुमति दिन्छ।
यो फेसनशील छ र यसले तपाईंलाई घरबाट वा अझ राम्रोसँग, ओछ्यानबाट काम गर्न अनुमति दिनेछ।
तपाईंसँग धेरै अन्य विकल्पहरू छैनन् र तपाईंलाई राम्रो फोटोहरू कसरी लिने भनेर थाहा छ।
तपाईं चाँडै उठ्न चाहनुहुन्न र कम पनि तपाईं आफ्नो काममा धेरै समय खर्च गर्न चाहानुहुन्छ।
कुनै पनि अन्य कारण जुन ईन्सेप्ट, ईर्ष्या वा प्रेरणा जस्ता अवधारणाहरूसँग केहि गर्न सक्दैन।
यदि तपाई व्यावसायिक हुनुहुन्छ भने, म तपाईको लागि केहि गर्न सक्दिन, यो तपाईको लेख होइन। त्यसो भएकोले, सुरु गरौं। म ग्यारेन्टी दिन्छु कि यदि तपाईं यी सबै सुझावहरू एक महिना भन्दा कममा लागू गर्नुभयो भने तपाईं सेतो कलर बिना नै ग्राफिक डिजाइनर हुनुहुनेछ। यो सिफारिश गरिन्छ कि तपाईं तिनीहरूलाई पानामा लेख्नुहोस् र दिमागमा राख्नुहोस्, ग्राहकले तपाईंलाई भाँडा लिने मनसायले कहिले देखाउँदछ भनेर तपाईंले कहिले थाहा पाउनु हुने छैन, सबैभन्दा पहिले तपाईं सतर्क हुनै पर्छ। म हुन जाँदैछु, वास्तवमा यो लेख मा म ग्राहकहरु फेरि उल्लेख छैन, बस मामला मा।
ब्रान्डि?? तपाईंलाई यसको आवश्यकता पर्दैन जबसम्म तपाईं आकर्षक डिजाइनर हुन चाहनुहुन्न
क्लासिक बर्बाद डिजाइनर बन्ने कोसिस गर्दा हामीले गर्ने एउटा गल्ती हाम्रो आफ्नै ब्रान्ड सिर्जना गर्ने प्रलोभनमा पर्दछ वा उनीहरूले अब यसलाई व्यक्तिगत ब्रान्डि call भनिरहेका छन्। तपाईको व्यक्तिगत छवि, तपाईको आफ्नै लोगो वा तपाईको व्यक्तिगत ब्ल्ग सिर्जना गर्न कत्ति रमाईलो लाग्न सक्छ, सत्य यो हो कि यसले तपाईलाई केवल व्यावसायिकतालाई हटाउन सक्छ र अझ खराब के हो ... हामी जसको विश्वास कमाउँछौं जसको नबोल।
तपाईंको प्रशिक्षण अवधि सकियो, तपाईंलाई अरू केहि जान्नु आवश्यक पर्दैन
प्रत्येक डिजाइनरको जीवनमा एक बिन्दु आउँछ जब यो पेशाको बारेमा सबैलाई थाहा हुन्छ। एक दिन तपाईं उठ्नुभयो र सोच्नुहोस् "यो कुरा हो, मलाई सबै कुरा थाँहा छ" र त्यो राम्रो दिन हो किनकि त्यस घडीमा तपाईले महसुस गर्नुहुनेछ कि तपाईं दिवालिया हुन तयार हुनुहुन्छ। तपाईंले महसुस गर्नुभएको छ कि केहि नयाँ सिक्न र अन्य व्यक्तिको कामहरू अवलोकन गर्नाले तपाईंलाई केही नवीन सिर्जना गर्न प्रेरित गर्न सक्छ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंलाई थाहा छ सर्जनशीलता र प्रेरणा बर्बादसँग उपयुक्त छैन। नबिर्सनुहोस्, तपाईलाई सबै कुरा थाहा छ।
बजारमा सर्ने मूल्यहरू जाँच वा परामर्श नगर्नुहोस्
हामीले कुरा नगर्नेहरूलाई डराउने राम्रो तरिका भनेको मध्यम वा लोसी सेवाको लागि उच्च मूल्यहरू सेट गर्नु हो। यस तरिकाले हामी सुनिश्चित गर्छौं कि यदि कसैले हाम्रो सेवा प्राप्त गर्दा यी रकमहरू तिर्दछ भने, तिनीहरू डराउँछन् र फेरि देखा पर्दैनन्। यदि हामी यो गर्छौं पनि हामी एक नराम्रो प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्दछौं किनकि यसले पक्कै हाम्रो कामको बारेमा नराम्रो समीक्षा दिन्छ र म सबैलाई हाम्रो सेवाहरू भाँडामा नदिन सिफारिस गर्दछु। यदि तपाईंले यो सहि गर्नुभयो भने, तपाईं अन्यलाई पनि तपाईंको लागि कार्य गर्न लगाउन सक्नुहुनेछ र यसैले चाँडै नै विनाशमा पुग्नुहुनेछ।
मार्केटिंग र (हामी दोहोर्‍याउँछौं) ब्रान्डि you तपाईंको लागि होईन
के गल्ति छ? के तपाई मान्यता प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ वा निरन्तर कामको प्रवाह प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ? तपाईं त्यो सही चाहनुहुन्न? ठिक छ, तपाईंलाई थाहा छ, आफैलाई त्यहाँ बेच्न कोसिस गर्नुहोस्। पदोन्नतीहरू नगर्नुहोस्, कुनै पोर्टफोलियो सिर्जना नगर्नुहोस् (र यदि तपाईं त्यसो गर्नुहुन्छ भने, ती कम व्यावसायिक कार्यहरू देखाउनुपर्दछ, हुनसक्छ ती जोसँग तपाईंले किशोरावस्थामा डिजाइन गर्न थाल्नुभयो र जुन अरूलाई लाज लाग्छ)। यसले मलाई रमाईलो बनाउँछ किनभने त्यहाँ धेरै व्यक्ति छन् जसले मलाई क्लासिक बर्बाद डिजाइनर हुन सल्लाह माग्दै लेख्छन् तर यसको बाबजुद पनि म उसको प्रोफाइलमा हेर्छु र एक पृष्ठ, डिभिएन्टमा प्रोफाइल, ड्रिब्बल वा बेहान्समा, पर्याप्त पेशेवर पोर्टफोलियोमा खोज्छु। र यो मात्र होईन ... साथै एक पृष्ठ जहाँ उनीहरूले सेवाहरू प्रस्ताव गर्दछन् र विशेष अफरहरू र पूरक सेवाहरू पनि सिर्जना गर्दछन्! के तपाईं विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ? यो कुनै बाटो छैन। केवल तपाईंले यी सल्लाहहरू पढ्नुपर्दैन, तपाईंले तिनीहरूलाई अभ्यासमा राख्नुपर्दछ ... रुन एक्लो हुँदैन, यसको लागि केही प्रयास आवश्यक पर्दछ।
धेरै महत्त्वपूर्ण: तपाईले कमाएको भन्दा बढि खर्च गर्नुहोस्, अन्यथा यसले मुनाफा लिन सक्छ
म तिमीलाई कुनै पनि मोटरसाइकल बेच्ने छैन। त्यहाँ कहिलेकाहीं हामी जुनसुकै मेहनत गरेर काम गर्छौं, भाग्य हाम्रो पक्षमा हुँदैन र मानिसहरूले अन्तमा हामीलाई कसलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्छन्। त्यहाँ राम्रो रेखाहरू छन्, ती सबै हो, केहि पनि हुँदैन, तपाईंले या त नाटक पनि गर्नुपर्दैन। तर यस भन्दा पहिले मसँग राम्रो खबर छ। तपाईं एक बर्बाद ग्राफिक डिजाइनर हुन जारी राख्न सक्नुहुन्छ चाहे तपाईं कति पैसा कमाउनुहुन्छ ... त्यहाँ एक धेरै साधारण गल्ती छ र त्यो हो कि मानिसहरूले बचत कार्यहरू गर्छन वा कामका सामग्रीहरूमा लगानी गर्छन् ... कति अपमानजनक, सही? यो सबै खर्च गर्नुहोस्, त्यस्ता चीजहरूमा जुन तपाईंको कामसँग कुनै सरोकार छैन।
संगठित नहुनुहोस्, धेरै कम कामको तालिका सेट गर्नुहोस्
त्यहाँ पहिले नै धेरै धेरै डिजाइनरहरू छन् जो हरेक दिन धार्मिक रूपमा उठ्दछन् र धेरै चाँडै। तिनीहरू चाँडै उठ्छन् र दिनको सुरूदेखि उनीहरूले हामीले नाम नदिनेहरू भेट्टाउन खोज्छन्, उनीहरूले आफ्नो मार्केटिंग रणनीति डिजाइन गर्छन् र तपाईंले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि यसले उनीहरूलाई धेरै राम्रो नतिजा दिदैन।
यदि कसैले तपाईंलाई काममा राख्छ भने, उनीहरूको कुरा सुन्नुहोस् र निश्चित रूपमा उनीहरूलाई राम्रो सेवा नदिनुहोस् वा डेडलाइन पूरा नगर्नुहोस्
यसको विपरितले मात्र केही कुरा निम्त्याउन सक्छ: वफादारी। ग्राहक सेवा आविष्कार गर्नेहरू द्वारा थियो जुनहरू हामीले सम्बन्ध नराख्नेहरूसँग ठोस सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्छन र खराब काम गर्दछन्, उनीहरूको कामबाट मर्यादाका साथ बाँच्न चाहन्थे। डरलाग्दो
आफन्त र छिमेकीहरूलाई नि: शुल्क कामको प्रस्ताव गर्नुहोस्
म लगभग बिर्सिएँ। पक्कै तपाईंको आजीवन साथीहरूलाई थाहा छ तपाईंले के गर्नुहुन्छ र तिनीहरूसँग केही बियर वा कहिलेकाँही केही पनि विनिमयको लागि तपाईंको कामको माग गर्ने अधिकार छ। यी प्रकारका व्यक्तिहरूलाई राम्रोसँग हस्ताक्षर गर्न को लागी प्रयास गर्नुहोस् जुन उनीहरूलाई चीज चाहँदैन। तपाईं भर्खर एक राम्रो पर्यवेक्षक बन्नु पर्छ, यी केटाहरूले आफ्नो डस्टर सिधा देख्न सक्छन्। तिनीहरू सामान्यतया तपाईंलाई आठ घण्टा रोजगारीको बदलीमा पदोन्नति जस्ता चीजहरूको कबूल गर्छन्, कहिलेकाँही अधिक लामो। प्रलोभनमा नपर्नुहोस्, कुनै पदोन्नतीहरू छैनन्, त्यसले केवल तपाईलाई भ्रमित पार्न सक्छ। यदि उनीहरूले तपाईंलाई कफि वा केही तपस प्रस्ताव गर्छन् तपाईं तिनीहरूलाई स्वीकार्न सक्नुहुन्छ तर तिनीहरूलाई दुर्व्यवहार गर्नुहुन्न, तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईंको वास्तविक लक्ष्य आफैलाई बिगार्नु हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ग्राफिक डिजाइन » कसरी एक घटिया ग्राफिक डिजाइनर हुन: आपतकालीन दिवालियापन को लागि अन्तिम गाइड
रिकार्डो मार्टिनेज भन्यो
कस्तो राम्रो छ! उनी
म सबै कुरा बाट मोहित थिए!
रिकार्डो मार्टिनेजलाई जवाफ दिनुहोस्